Murteen salgeen seeraa ajjeechaa Maaykil Braawun irratti kenne jeequmsa guddaa Ameerikaa keessatti uume - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Murteen salgeen seeraa ajjeechaa Maaykil Braawun irratti kenne jeequmsa guddaa Ameerikaa keessatti...
Murteen salgeen seeraa ajjeechaa Maaykil Braawun irratti kenne jeequmsa guddaa Ameerikaa keessatti uume
Salganeen seera ‘jury’ haala ajjeechaa Maaykil Braawun, mucaa ganna 18, xiinxallaa ture murtee irra gahe ifa godhe. Akka qorannoo salganee kanatti lubbuu Maaykil kan baase angawaan poolisii Daaren Wiilsan, ganna 28, yakka seeraaf isa dhiheessu tokkollee kan hinhojjanne ta’uu isaati kan mul’isu.
Ragaaleen qorannoo yakkaa salganeedhaan gadi lakkifaman akka addeessanitti, Daaren Wiilsan yeroo Maaykil Braawun woliin jeequmsa keessa turetti maaltu sitti dhagahamaa ture jedhamee yoo gaafatamu:
‘Na ajjeessuf deema ture.’ ‘Akkamittin lubbuu koo baraara?’ ‘Akkamittin kana jalaa ufbaasa?’ jedhaa dhiphachaa ture jechuudhaan qorattootatti himeera.
Itti dabaluudhaanis Maaykil qaamaan heddduu isarra guddaa ta’uu bira ce’ee baay’ee akka isa jeeqaa turee salganee fi poolisootaa yakka qoratanittis dubbateera.
Akka seera naannoo Misuuriitti (Ameerikaa) dhimmichi kuni yakka moo yakkaa miti wanti jedhu kan hundaayu yaada Daaren Wiilsan yeroo sanitti lubbuun isaa balaa jala seenuu isii guutummatti amanuu isaa irratti. Egaa, kanuma irratti hundaayeeti salganeen dhimmicha qorataa ture, lubbuun poolisichaa balaa jala turte isa jedhu fudhachudhaan, Daaren Wiilsan yakkamaa miti jechuun kan murtee isaa ifa godhe. Abbaan alangaa magaalaa ‘St.Luwiis Bob McCulloch kanneen ragaa bayan tokko tokko yaadaa adaa qabaatanuu, hedduun isanii Maaykil Braawun poolisichatti daangaa ce’uu isaa raga bayaniiru jechuun dubbateera. Kan uumame, ‘Hangamuu gaddisiisaa ta’us, yakkaa miti garuu’ jechuun dubbate abbaan alangaa Bob McCulloch.
Akka angawaa poolisii Daaren Wiilsanitti jeequmsi isaafii Maaykil jiddutti kan eegale yeroo inni dargaggoota gugurraalee lama wolakkeessaa daandii irra deeman argee, maaliidhaaf qarqara daandii irra akka hindeeme gaafatetti. Isaan keessaa tokko gara deemanitti kalaayuu isanii itti hime. ‘Ta’us garuu, rakkoo maal qaba qarqara daandii irra deemuun?’ gaafate Daaren Wiilsan. San booda inni biroo afaan daddarbuu akka eegaleedha daaren kan dubbatu.
Poolisichi gara dargaggeeyyii lamaaniitti siiquun konkolaataa dhaabe. San booda ture dhimmichi kan too’annaan ala bahe.
Daaren Wiilsan gaafiifi debii sa’aa afurii olfudhate qorattota woliin godhetti, haala yeroo san ture gadi fageenyaan ibseera. Akka ibsa angawaa poolisii Daaren Wiilsanitti, yeroo inni konkolaataa isaa keessaa bu’uuf yaalii godhutti, Maaykil Braawun isa abaaruun alatti balbala konkolaataa itti cufe. Foddaan konkolaatichaa, garuu, banaa turte. Foddadhaan, ‘ asiifii achi jedhaa fuula irra narukutaa ture’ jechuun Maaykil Braawuniin himata angawaan poolisii Daaren Wiilsan. Foddaadhaan, Maaykil Braawun, yoo xiqqaate yeroo sadi konkolaaticha keessa seenuudhaafis tattaafii godhaa turuu isaa hima angawaan poolisii kuni.
Yeroo Maaykil Braawun tamboo harkaa qabu, tamboonumtuu kan hatame jedhameeti kan gabaafame, hiriyyaa isaatti kenuuf duubatti garagaluudha kan Daaren harka isaa qabate. Maaykil Braawun garuu ciminaa fi humna qaba waan tureef harkaa baafate, akka ibsa Daarenitti.
‘Duruu jiddutti qabame wan ta’eef mal akka gurbaan nagodhuuf deemu hinbeeku ture. Garuu dubbichii gaarii ta’uuf akka hindeemne beeke,’ jechuun qorattootatti hime Daaren Wiilsan.
Akka aara nama boochisu fudhatee gurbaa ufirraa hinqabne, Maaykil Braawun akka hin sochoonetti isa qabuu isaa, ammas meeshaa ‘Taser’ kan poolisoonni nama ufirraa ittiin tiksan harkaa waan hinqabneef shugguxii isaa gadi baafachuuf dirqamuu isaati kan Daaren dubbatu.
Maaykil Braawun, ‘dhaltuu ykn sodaattuu waan taateef natti hindhukaastu’ naan jedhe jechuun Daaren Wiilsan kannen isa qoratanitti hundatti hime. Shugguxii isaas Maaykiliin harkatti qabamuu dabalee himata, poolisichi.Daaren Wiilsan, akkasittuu, afaan shugguxii gara Maaykilitti deebisuu danda’eera. Yeroo lama dhukaasuu yaalee womtuu akka hinuumamneedha kan ifa godhe. Kunis kan ta’eef Maaykil quba isaatiin qawween aka hindhukaane waan dhoorgeef.
Yaalii sadaffaatti, ‘harki koo inni mirgaa guutumatti dhiiga,’ jedha Daaren. Maaykil baay’ee rifate, dallane, qaama isaa gara hidhaa olii akka konkolaaticha keessa seensiseedha kan Daaren ifa godhe. Itti dabaluudhaanis, ‘irra deddeebi’ee narukute’ jechuun poolisichi maaykiliin yakka. Ammas yeroo lama wolfaana dhukaasuuf yaalus akka hinmilkoofneedha polisichi kan odeessu. Yeroo kana Maaykil Braawun dheessuu eegale.
Angawaan poolisii konkolaataa keessaa bu’ee Maaykil Braawun hordofe, huna dabalataas gaafate. ‘Maaykil Braawunis dhaabbatee natti garagale’ jedha Daaren Wiilsan. Maaykil itti fiiguu eegale, harka isaas mudhii poolisichaatti mare. ‘Yeroo heddun itti dhukaase,’ jedha Daaren. Ammas irra dedeebi’ee iitti dhukaase. ‘Rasaasni hangi tokko mataa dhahe. San booda ni kufe,’ jedha angawaan poolisiii akkamitti akka lubbuu Maaykil Braawun baase yoo qorattootatti himu.
Ajjechaa fi murtee salganee hordofee mormii fi jeequmsi adda addaa magaalaa Fargusanii fi magaalota Ameerikaa heddu keessatti adeemaa jira. Duukkaanaa heddutu gubate. Konkolaataa heddutti ibiddi qabate. Jeequmsaa fi dhukaasa heddutu ta’aa ture. Ajjeefamuun namaa hingabaafamne, garuu. Poolisiin hanga ammaatti namoota 29 too’annaa jala oolchuu isaa beeksiseera.
Namoonni ogummaa seeraa qaban akkaataa salganeen murtee kana irra gaye shakku, kaanneen murtee kana guutummatti fudhatama dhabsiisanis heddu. Qorannoon dhimmicha kana gadi fageenyaan ilaalu itti fufee jira. Perezidaant Baaraak Obaamaan murtee salganee ilaalchisee, ‘murtee salganeet namoonni simatan jiru, kanneen kuffisanis akkasuma. Kanneen aaranis jiru,’ jedhe. Obamaan kanneen mormanis karaa nagaayaan, kanneen naga kabajsiisanis tankaarfii ciccimaa mormitoota irratti fudhachuu irraa akka ufqusatan gaafateera.
ajjeechaa maaykil braawun
Previous articleItoophiyatti gufuuleen brokraasii sochii daldalaa danqaa jiru jedha Baankiin Addunyaa
Next articleTamsaasa kallattiin ‘International Space Station-ISS’ irraa dabruun ardii daawwatuun danda’ame